Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya dagaalka Shabaab | Universal Somali TV
Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya dagaalka Shabaab
Ka dib guuldarradii maleeshiyada Al Shabaab ay Jimcihii kala kulmeen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka Baxdo ee Gobolka Galgaduud ayaa waxay labada maamul ku heshiiyeen inay iska kaashadaan amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Maamulka Gobolka Mudug iyo Saraakiisha Ciidamada Booliska ee labada dhinaca ayaa maanta Magaalada Gaalkacyo ku yeeshay kulan looga hadlayay xaaladda amniga ee gobolkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa, garab istaagna loogu muujin lahaa Ciidanka Daraawiishta Galmudug ee maleeshiyada Al Shabaab kula dagaalamaya aagga deegaanka Wisil ee Koonfurta Gobolka Mudug.
Gudoomiye Kuxigeenka Gobolka Mudug ee qaybta Puntland, Xasan Cabdullaahi Warsame (Wardheere) ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in si dhow loo taakuleeyo Daraawiishta Galmudug ee ku sugan jiidda hore ee Wisil.
"Gobolka Mudug, maadaama uu mid yahay in xaaladda Wisil labada dhinac ama labada maamul wixii ay ka gaysan karaan oo taakuleyn ah inay ka gaystaan, in ciidanka halkaa joogga shidaalkooda, garaamkooda iyo waxqabkooda aan la isla fiirino, si cadowgaas Islaamka ah ee Shabaabka ahi aysan ummadda u aafeynin, gobolkaana saamayn horey ayay ugu yeesheenee, saamayn dambe aysan nagu yeelan." Ayuu yiri Gudoomiye Kuxigeenka Gobolka Mudug ee Puntland.
Waxa kaloo uu sheegay in labada maamul ay ku heshiiyeen wax ka qabashada falalka dhaca gaadiidka la xiriira ee muddooyinkii ugu dambeysay ku soo badanayay Magaalada Gaalkacyo, isaga oo intaasi ku daray inay jiraan gaadiid la kala dhacay labada shacab oo la isku celiyay.
"Waxa kaloo iyana aad looga munaaqashooday Booliska isku dhafka oo muddana jiray, haatana shaqadooda gobolka ay aad u yareyd sidii Booliska loo xoojin lahaa, dibna loogu yegleeli lahaa, baahiyaha iyo amkaaniyaadka Booliska haysta, haddii ay ahaan laheyd xagga mushaarka, garaamka iyo adeegooduna labada maamul isla fariisiyaan, maadaama Boolisku isku dhaf yahay, labada maamul-na uu yahay boolis u shaqeeya, iyana waa la isla qaatay, meel fiicana warkaasi waa uu ku soo geba-gaboobay." Ayuu yiri Wardheere.
Gudoomiye Kuxigeenka Gobolka Mudug ee Galmudug, Axmed Maxamed Shire (Qoodaar) ayaa dhankiisa sheegay in laga adkaan karo Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama, haddii hal meel lagaga soo jeesto.
"Shirkan waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo looga hortaggayo argagixisada. Argagixisada ka hortaggeedu wax micno ah uu leeyahay malahan, waa la buunbuuninayaa, dowladahana waxaan leenahay sida Baxdo aad ku aragteen ama Wisil nuuc walba, waa la iska dhicin karaa nimanka ee hala iska dhiciyo. Wuxu waxay yihiin in la ogaadaa la rabaa iyo meesha ay ka socdaan." Ayuu yiri Qoodaar.
Qoodaar ayaa Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyadaba ugu baaqay inay xoogga saaraan soo afjaridda cidda maalgelisa kooxaha argagixisada, taasoo uu qabo inay noqon doonto dhammaadka kooxahahaasi.
"Waxaan leenahay waan iska dhicinaynaa, xayaataa ku dhimanaynaa, Ilaahay baana wax dila, qof kale oo wax dili karaa ma jiro." Ayuu yiri Qoodaar.
"Waxaan rabnaa Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyaduba waxaani waa la afjari karaa, hala soo afjaro. Waa la afjari karaa ee yaan mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo, mashruuc in laga dhigaa meel fog kama jirto, dadkana laguma dul hayn karo, in shacabka lagu dulhayo cadow, meel fog kama jirto." Ayuu yiri Qoodaar oo intaasi raaciyay "Reer Mudug waxaan kula dardaarmayaa iska dhiciya cadowga."
Kan-xigaMadaxweynaha Somaliya oo la kulmay dh...
Kan-horeGudoomiyaha Golaha Shacabka oo ka had...
65,221,707 unique visits